Vaovao - Ny toetoetran'ny fikirakira sy ny sehatry ny fampiharana ny fantsona fibre carbon
Fomba fanodinana sy fantsom-panafarana fantsom-pitrandrahana karbaona
Ny fantsom-pitrandrahana karbaona, fantatra ihany koa amin'ny fantsona karbonika, dia vokatra fantsom-bokatra vita amin'ny fibre karbonika sy damina. Ny fomba famokarana ampiasaina matetika dia ny fibre prepreg, ny fibre carbon fiber pultrusion ary ny fiolahana. Amin'ny dingam-pamokarana, ny karazany sy ny haben'ny fantsona fibre karbaona dia azo vokarina araky ny fanitsiana ny lasitra. Ny tarehy ny fantsom-bozaka karbôna dia azo hatsaraina mandritra ny fizotry ny famokarana. Amin'izao fotoana izao, ny velaran'ny fantsona fibre karbaona dia 3k matte tenona tsotra, twill matte, tenona tsotra mamirapiratra, twill mamiratra ary endrika hafa.
Ny fantsom-pitrandrahana karbaona dia manana tombony amin'ny tanjaka avo, fanoherana ny abrasion, fanoherana ny asidra sy alkali ary ny lanjany maivana. Ho fanampin'izany, ny vokatra dia manana andian-toetra tena tsara toa ny habeny tsy miovaova, fitondran-tena elektrika, fitondra hafanana, coefficient fanitarana hafanana ambany, fandosiran-tena, fidiran'ny angovo ary fanoherana ny hatairana. Manana tombony maro izy io toy ny modulus avo lenta, fanoherana ny havizanana, fanoherana ny fikororohana, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny fitafiana.
Fampiharana saha fantsom-bozaka karbôna:
1. Amin'ny fampiasana ny hazavany sy ny matanjaka ary ny hazavana sy ny mekanika sarotra, dia be mpampiasa amin'ny fiaramanidina, aerospace, fananganana, fitaovana mekanika, indostrian'ny miaramila, fanatanjahan-tena sy fialam-boly ary fitaovana hafa amin'ny rafitra.
2. Amin'ny fampiasana ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny hafanana, ny fahamendrehana tsara (0.2mm), ary ny tanjaky ny mekanika avo lenta, ny vokatra dia mety amin'ny vatan'ny fiara amin'ny fitaovana fanontana birao.
3. Ampiasao ny fanoherana ny havizanana hametahana ny angidimby; ampiasao ny fampihenana ny hovitrovitra hampiasaina amin'ny fitaovana fampitaovana.
4. Mampiasa ny heriny avo, anti-antitra, anti-ultraviolet, ary toetra mekanika tsara, dia mety amin'ny lay, fitaovam-pananganana, harato moka, hazo fiakarana, kitapo baolina, valizy, talantalana fampirantiana, elo, lay, fitaovam-panatanjahan-tena , hazo zana-tsipìka, Klioba, harato fanazaran-tena golf, paingotra familiana faneva, fitaovana fanatanjahantena rano, sns.
5. Amin'ny fampiasana ny lanjany maivana sy ny toetrany henjana, ny vokatra dia mety amin'ny papango, saucers manidina, tsipìka, fiaramanidina elektrika ary kilalao isan-karazany.
Fotoana fandefasana: Mar-29-2021